Umshini wokuHulela u-HLQ wokuThengisa, ukuvelisa izixhobo zokusebenza
I-HLQ INDUSTRIAL COQUETMENT CO., LTD (Igama langaphambili: DaWei Induction Heating Machine Co., Ltd) U Igxile koomatshini bokufudumeza i-Induction kunye noomatshini bokwenza i-welding ye-ultrasonic kunye nokuthengisa ngaphezulu kweminyaka eyi-15. Oomatshini bagubungela ubuQinisekiso boPhezulu boMbane oMatshini oMiselweyo kunye noMatshini wokuShushubeza, umatshini weplastiki wokuwelda, isinyithi sentsimbi, i-Air Cooled Induction Heating Machines, iiFlexible Brazing Systems, i-Auto Induction yokuQinisa iZiko, ukuqinisa inkqubo yokuqinisa, iAluminiyam kunye neeNdawo zokuNyibilikisa iCopper. IiWelders zeTyhubhu kunye neeNkqubo zokuLungisa iiThermal. Zisetyenziswa ngokunyanga kunyango lobushushu, ukubopha, ukubopha, ukuwelda, ukubumba, ukunyibilika, ukutshisa kunye nezisombululo ezifanelekileyo zokuguqula.Abaguquli abaguquleli ukusuka kwi-500Hz ukuya kwi-2.0MKHz frequency kunye ne-IGBT yamandla ukusuka ku-5 ukuya ku-2000 KW.
I-HLQ Induction Equipment Equipment Co
Amashishini okushisa sebenzisa izixhobo zombane ezisemgangathweni kunye nobuchwepheshe obutsha obukhethekileyo. Bangakwazi nokungena kwi-nonmetal ukutshisa izitye ukuya kwintsimbi yefayili ngaphandle kokuqhagamshelana neensimbi ngokuthe ngqo. Ukuthelekisa nezinye iindlela zokufudumala, umshini wethu wokushisa otyunayo unamathuba amaninzi: ulawulo olupheleleyo, ukuzithiba nokuzikhusela. Iqala ngoxinzelelo olufunekayo kunye namanzi, ukuthatha isikhala esingaphantsi komhlaba kwaye sidinga ixesha elide lokuqalisa kunye nexesha lokuvala, ukufudumala ngokukhuselekileyo, ngaphandle kokungcola.
Ngophuhliso lwenkampani, inkampani yethu ihlawula ngakumbi nangakumbi kuphando & nophuhliso kunye nenkonzo emva kwentengiso. Sithobela ISO9000-2000 ngokungqongqo ekusebenzeni kwethu. Inkampani yethu iphumelele udumo oluhle ngomatshini wethu okumgangatho ophezulu kunye nokuhle.
I-HLQ Inkunkuma yokucoca